Mucaaradka Libya oo khasaaro ba’an kala kulmay deegaanka Bareega kadib… – SBC
Mucaaradka Libya oo khasaaro ba’an kala kulmay deegaanka Bareega kadib…
Tripoli:- Wararka ka imanaya dalka Libya ayaa ku waramaya in ugu yaraan 10 qof ay ku dhinteen 172 kale ay ku dhaawacmeen wear ciidanka Qadaafi ay ku qaadeen Dekeda Bareega ee naftada laga dhoofiyo bariga libya.
Ciidanka mucaaradka ayaa ku sugan meel 20km ka baxsan magaalada si ay uga hortagaan gantaalada loo yaqaan garaad ee ay isticmaalaan ciidanka qadaafi .
Dhanka kale duqeymo ayaa laga maqlayey tuulada Biir Ciyaad oo 15km ka xigta dhanka koonfureed deegaanka Biirul Qanam.
Mid kamid amaanduulayaasha ciidanka oo aan magaciisa la xusin ayaa sheegay in 15 gawaarida dagaalka oo uu ay wateen xoogaga Qadaafi in ay isku dayeen in ay u soo dhowaadaan degaanka Biirul Qanam balse ciidanka mucaaradka ay u suurtagashay in ay iska-caabiyaan kadib markii ay xabado is-dhaafsadeen.
Telvison-ka qaranka Libya ayaa sheegay in ciidamada NATO ay duqeymo cirka ah ku qaadeen goobo ay degnaayeen dad rayid ah magaalada Tripoli.
Madaxweyne Qadaafi ayaa shaaca ka qaaday khudbad cusub uu uu jeediyey mar labaa in uusan ka tagi doonin dhulka awoowayaashiis, islamrkaana wuxuu ku gacan seeray baaqyada beesha caalamka ay ugu soo jeedinayaan in uu xilka iska dhiibo.
Qadaafi ayaa ku tilmaamay hogaamiyaasha mucaaradka in ay yihiin ayax iyo baraanbararooyin islamarkaana shan malyan oo Libyan ah diyaar u yihiin in ay xoog ku galeen goobaha ay mucaaradku ka taliyaan sida Benghazi iyo Masraata iyo buuraha galbeed dalka Libya.
Cornel qadafi aad iyo aad baan utaagersanahy waayo waa hogaamiyaha keliya oo Westerenka siyaasadooda kasoo horjeeda. Halka carbta kale eey taagersanyihin westernka